Global Voices teny Malagasy » Fanalan-jaza ao Arzantina: Mitohy ny tolona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Marsa 2021 15:03 GMT 1	 · Mpanoratra Lucia Leszinsky Nandika (en) i Liam Anderson, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Arzantina, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Pikantsary avy amin'ny France24/YouTube , avy amin'ny hetsika ‘mpanohana-aina’ tamin'ny 29 Novambra 2020.
Tamin'ny 30 Desambra 2020, nanatevin-daharana ny lisitra fohy ahitana ireo firenena mametraka ny fanalan-jaza ho zo tsy misy fameperana amin'izay antony i Arzantina, izany hoe, tsy mila mamaritra ny antom-pangatahana hanala zaza ny vehivavy bevohoka, ao anatin'ny 14 herinandro voalohany nahabevohoka. Napetraka ho ara-dalàna  tamin'ny 14 Janoary 2021 ny volavolan-dalàna, nankatoavina tamin'ny volana desambra taorian'ny nahazoany vato manohana 38 , manohitra 29, ary iray tsy nisafidy.
Iray volana latsaka talohan'ny nampanan-kery ny lalàna vaovao nanerana ny firenena, nanaiky ny fampiakarana raharaha napetraky ny vondrona iray momba ny olom-pirenena milaza fa manomboka hatrany am-bohoka ny fiainana kanefa mifanohitra amin'izany ny lalàna, ny mpitsara Marta Beatriz Aucar de Trotti, lehiben'ny Fitsarana Sivily sy ara-barotra laharana faha-19 ao an-tanànan'i Resistencia, any amin'ny faritanin'i Chaco. Vokatr'izany, tamin'ny faran'ny volana janoary 2021, nametraka  fepetra fitandremana izay nampiato ny fampiharana ny lalàna IVE tao amin'ny faritanin'i Chaco i Aucar de Trotti .
Samy nampakatra ny raharaham-pitsarana avy hatrany ny fikambanana fiarahamonim-pirenena  Unidos por la Diversidad eny ifotony satria lalàna federaly izany fa tsy lalàna faritany, avy eo nitaky ny raharaha mba hotsarain'ny mpitsara manana fahefana nasionaly ny minisiteran'ny fahasalamana , ary farany toa izany koa avy amin'ilay mpampanoa lalàna ao amin'ny fanjakana Chaco, Cecilia Fernández Almendra. Na izany aza, mbola manan-kery ilay fepetra fitandremana; ka na dia manan-kery manerana ny firenena aza ny zo hanala zaza ara-dalàna, dia mbola mihantona any Chaco ny fampiharana azy ankehitriny.
Ankoatra ny didim-pitsarana tany Chaco, nisy ny fampiakarana ny raharaha sy fitoriana ny filoham-pirenena Arzantina, Alberto Fernández, sy ireo parlemantera nifidy nankatoa ny lalàna tao amin'ny faritanin'i Córdoba. Ahitana fangatahana fitoriana fanesorana ny filoham-pirenena ny fitoriana  napetraky ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena Derechos Humanos y Violencia de Género (Zon'olombelona sy ny Herisetra maha-lahy na maha-vavy) ary milaza fa tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana io lalàna io.
Tamin'ny Desambra 2019, herintaona talohan'ny nandaniana ny lalàna momba ny fanalan-jaza, nanambara ny fananganana ny lisitr'ireo  Mpanao fanamarihana ara-tsikalapieritreretana ny Vaomieram-Pitsaboana avy ao amin'ny Faritanin'i Misiones, “mba hiarovana ny zon'ireo izay noho ny antony ara-pitondran-tena, etika, filozofika, kolontsaina, antony ara-pinoana na ara-potokevitra, mihevitra ny tenan'izy ireo fa tsy afaka manao fitsaboana izay mifanohitra amin'ny fandresen-dahatra ao aminy. ” An-tsitrapo, manokana ary tsiambaratelo ny fangatahana hampidirina ao anaty lisitra.
Mifanohitra amin'ny faritanin'i Chaco, Cordoba, ary Misiones, nampiharina miandalana any amin'ny faritra hafa ny lalàna. Araka ny fanambaran'ny  minisitry ny Vehivavy, ny Miralenta ary ny Fimaroana, Elisabeth Gómez Alcorta, ny tanàna sy faritanin'i Buenos Aires, ary La Pampa dia isan'ny distrika izay tena mampihatra tsara ny lalàna.
Ankoatra izay, dia nanjary lohalaharana manoloana ny lalànam-paritany mametra ny fahazoana misoprostol ny lalàna nasionaly manala ny heloka fanalan-jaza. Ohatra iray amin'izany ny faritany Mendoza, izay voafetra  ny fivarotana misoprostol. Nanambara ny fanavaozana ny lalànany hifanaraka amin'ny fanavaozana ny lalàna Famaranana ny Fitondrana Vohoka An-tsitrapo (IVE) ny Minisiteran'ny Fahasalamana ao Mendoza, tamin'ny alàlan'ny fanapaha-kevitra navoaka tao amin'ny Gazety ofisialy.
Ohatra iray hafa amin'ny fampifanarahana ny lalàna vaovao ny Programa ho an'ny Fanamafisana ny Zo Hanala zaza napetraky ny IOMA, fandaharana fiantohana ara-pahasalamana ao amin'ny faritanin'i Buenos Aires miorina amin'ny rafi-pitsaboana mifototra amin'ny firaisankina. Ny programa, izay manolotra  handrakotra ny 100 isanjaton'ny rakipaika, no fiantohana voalohany any Arzantina mba hametraka ny zo hanapa-kevitra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/03/17/151882/
 nanatevin-daharana : https://es.globalvoices.org/2020/12/30/argentina-cierra-el-2020-haciendo-historia-se-aprueba-el-aborto-legal-seguro-y-gratuito/
 Napetraka ho ara-dalàna: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239808/20210115
 faritra : https://www.lmcipolletti.com/cipolletti-hubo-190-abortos-legales-un-ano-n754345
 fikambanana fiarahamonim-pirenena: https://www.chacodiapordia.com/2021/02/01/suspension-de-la-ley-ive-en-chaco-una-ong-apelo-el-fallo-de-la-jueza-trotti/
 minisiteran'ny fahasalamana: https://www.infobae.com/sociedad/2021/02/05/aborto-legal-las-idas-y-vueltas-de-la-puesta-en-practica-de-un-derecho/
 mpampanoa lalàna : https://chaco.gov.ar/noticia/63206/ley-de-ive-la-fiscalia-de-estado-apelo-la-resolucion-judicial-de-la-jueza-marta-aucar-de-trotti
 hoy ny fanazavan'i : https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100390969/aborto-legal-en-misiones-con-objecion-de-conciencia-y-un-protocolo-del-2013/#:~:text=En%20cuanto%20al%20decreto%20provincial,para%20que%20otro%20lo%20haga.
 Tambajotran'ny : http://redsaluddecidir.org/